बिना बे’पत्ता घ-टनाको पुरै नालीबेली यस्तो, अन्त:त घ-टनाको बारेमा यस्तो भनिन कुसुमले !! (भिडियो हेर्नुहोस) – Khabar28media
बिना बे’पत्ता घ-टनाको पुरै नालीबेली यस्तो, अन्त:त घ-टनाको बारेमा यस्तो भनिन कुसुमले !! (भिडियो हेर्नुहोस)
July 9, 2021 July 10, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
बिना बेपत्ता घटनाको पुरै नालीबेली यस्तो, घ-टनाको बारेमा यस्तो भनिन कुसुमले !! (भिडियो हेर्नुहोस) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला !! मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई निश्चित जरिवाना तिरेर घर फर्कन पाउने समय थप भएको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियाले गैरकानुनी श्रमिकका लागि सञ्चालन गरिरहेको रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रमको समय पुस १६ सम्मका लागि थपेको हो ।
यो समय असारको मध्यमा सकिएको थियो । यसबीचमा कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फकर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको भन्दै दूतवासले मलेसिया सरकारलाई यो कार्यक्रमको समय अवधि थप गर्न आग्रह गरेको थियो । दूतावासका आग्रहअनुसार दूतावासले समय थप गरेको जनाइएको छ ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको दूतावासको अनुमान छ ।
दूतावाससँग मलेसियामा यति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा काम गरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन ।दूतावासका आग्रहअनुसार दूतावासले समय थप गरेको जनाइएको छ ।
बिना बेपत्ता घटनाको पुरै नालीबेली यस्तो, घ-टनाको बारेमा यस्तो भनिन कुसुमले !! (भिडियो हेर्नुहोस)
Previous Article अचम्मको ढुङगा ८ दिनमा फुटाउन सकेनन् मुग्लीन नारायणगढ सडक खण्डमा हेर्नुहोस !! (भिडियो)
Next Article आजको राशिफल निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल शुभ अङ्क र शुभ रङ्ग सहित